Cologne ejị na otú Nweta E | Save A Train
Home > Travel Europe > Cologne ejị na otú Nweta E
Cologne ejị na otú Nweta E
(Emelitere ikpeazụ On: 10/09/2021)
The Cologne Festival bụ maa kwesịrị agbakwunye gị ịwụ ndepụta. 1.5 Nde na-abịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ọ bụla, ekweta! Makwaara dị ka ise-oge, a ụwa na-ama ememme bụ n'aka na-ihe ahụmahụ nke a ndụ. The Cologne ngagharingosi bụghị naanị fun ma super mfe na-esi na ụgbọ okporo ígwè, na-enyemaka nke Save A Train Lee anyị Atụmatụ maka The Cologne Festival 2019 na-esi n'ebe ahụ ụgbọ okporo ígwè.
Gịnị Iji Mkpọ maka Cologne Festival:
Ọ bụ oge na-aga ejiji shopping. Onye na-adịghị amasị uwe elu? The style bụ kama iche Brazil carnivals. Chee echiche ọzọ "Prussian Soldier" na a arọ dose of ntecha na sequins!
Cologne ejị nile elu a ememme fancy uwe, otú iji gị pụrụ ichetụ n'echiche! The ayama mma.
N'ihi bọọlụ na ndị ọzọ ime ụlọ ihe, mkpa ekike na-atụ aro. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka ahụmahụ ememe a, ị chọrọ aga ná mpụga! Dị na-echeta na-eyi ihe na-ekpo ọkụ n'okpuru! The ezigbo Cologne ngagharingosi ofufe na-adịghị yipụ site weather! Ọbịa onye na-abata na nke ikpeazụ nkeji ga-ahụ masks, ekike, na eme na-elu na ọtụtụ na-echekwa na etiti obodo. Dị ka a ikpeazụ resotu, a mfe red akwụkwọ imi bụ ihe niile ị chọrọ. chọrọ ụfọdụ uwe Ama.
Hanover na Cologne Ụgbọ oloko
Olee otú Iji Nweta na Cologne Festival:
Ị na-aga chọrọ enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè na Cologne si isi ojii. Nke a bụkwa otu n'ime Europe kasị mkpa n'ọdụ ụgbọ okporo n'ógbè nlekọta ọrụ, otú ị ga-agha na-ahụ a oge na suut gị na SaveATrain.
Ị nwere ike ịga njem Cologne Festival ngwa ngwa na comfortably si isi obodo na Germany na ndị ọzọ na mba Europe: Kwa ụbọchị, karịrị 1,300 ụgbọ oloko na-agba ọsọ n'etiti Cologne na ebe ofụri Germany na ná mba ọzọ. Isi nke ọrụ na-agụnye mba elu-ọsọ ụgbọ oloko na jikọọ Cologne na London, Paris, Amsterdam, na Brussels. na elu-ọsọ okporo ígwè ọrụ na Frankfurt, na Koln-Deutz ụgbọ okporo ígwè - nke abụọ ọnụ maka elu-ọsọ ICE ụgbọ oloko na Cologne - na Cologne / Bonn Airport ebe, Cologne ka n'ihu enwekwukwa ya ọrụ dị mkpa ka a Central ehiwe maka ụgbọ okporo ígwè iga.
The obodo ọha iga ozi na Cologne na gburugburu mba na-magburu onwe, featuring ala, tram, na ụgbọ ala ọrụ na ị ga-ezigbo agagharị n'oge ọnụnọ gị na Cologne.
The ọmụma nyere site German Railways Railway ụlọ ọrụ na-agụnye ọ bụghị nanị na ụgbọ okporo ígwè schedules, kamakwa ejikọta tram na ụgbọ ala schedules plus oge a chọrọ iji ruo kacha nso nkwụsị ma ọ bụ ebe ụkwụ.
Rotterdam na Cologne Ụgbọ oloko
Antwerp na Cologne Ụgbọ oloko
Kolsch olumba na Cologne ejị
Iji ghọta “iju” Cologne ejị omenala, ị ga-mkpa ịmụta a ole na ole na-ahụkarị okwu si Kolsch olumba. Ọ bụrụ na ha na-na na ọhụrụ gị, na-na-amalite inwe obi abụọ gị German nkà – kasị Germany amaghị ha ma.
Fastelovend, ma ọ bụ: Fasteleer
ejị, makwaara dị ka “Nke ise Season,” esetịpụ dị otú ahụ a pụrụ iche n'ebe ke obi nke kasị Cologne bi na ha nwere ọtụtụ okwu maka ya. Ọ bụ ezie na ejị, ma ọ bụ “Fastelovend,” kwuru na na-amalite na November 11 kwa afọ, n'ezie “oké ụbọchị” na-amalite na Ladies’ Night, ma ọ bụ “Weiberfastnacht” on Thursday n'ihu na-agba ruo mgbe chi ọbụbọ nke Ash Wednesday.
Luxembourg na Cologne Ụgbọ oloko
Liège na Cologne Ụgbọ oloko
Zurich na Cologne Ụgbọ oloko
Geneva na Cologne Ụgbọ oloko
Kolsch: Ọ bụ naanị na asụsụ ị na-aṅụ. Nke ahụ bụ na-agba ọsọ gag na Cologne, ebe olumba na n'obodo ime biya nwere otu aha. Nọmalị jere ozi na ogologo, gịrịgịrị iko, n'oge Cologne ejị ọ bụ plastic iko naanị dị ka ọ kenkwusi iko na-ekwe n'okporo ámá. I kwesịrị jidere Kolsch na a Brauhaus, ezie, echeta: Weta ego. Ọ bụ naanị na ịzụta ihe ọṅụṅụ tiketi na juru n'ọnụ pubs.
Berlin na Cologne Ụgbọ oloko
Nuremberg na Cologne Ụgbọ oloko
Bonn na Cologne Ụgbọ oloko
Stuttgart na Cologne Ụgbọ oloko
A “Butzcher” bụ nnukwu smooch. N'oge Cologne ejị ememe, anya na ha ga-susuru (“gebutzt,” ma ọ bụ na-ezi: “jebutz”) karịa na mbụ. Complete ọbìa kesaa adịghị njọ pecks na-amabughị’ cheeks, ezie na ụfọdụ mmiri Butzcher (na ọkọlọtọ Kolsch, “Butz”) nwekwara ike smudge ejị etemeete nile ihu gị.
Nke a na okwu na-ezo aka pubs, Ogwe, ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Fọrọ nke nta niile ha na-akụkụ na-eme ememe Cologne ejị. Ha ewepụsị ihe ngwá ụlọ ike a nnukwu-agba egwú n'ala na icho mma na ihe niile yi ruo ụbọchị isii nke ememe a n'usoro. N'ọtụtụ obodo pubs, naanị Kölsche music na-egwuri (songs na Kölsch olumba). Ị ga-achọpụta mgbe mgbe ruo 300 mita ogologo queues n'ihu ọdịnala pubs.
Gịnị bụ Weiberfastnacht?
N'isi ụtụtụ, n'okporo ámá jupụta na Cologne Festival nzuzu ekike. na kpọmkwem 11:11 ụtụtụ, n'okporo ámá ejị na-eze meghere site onyeisi obodo nke Cologne na Cologne si ejị triumvirate.
Nti Eziokwu: inyom (Women)
na 1824 na Beuel, a akụkụ nke Bonn, otu ìgwè ụmụ nwanyị na-akwa nwanyị guzobere kọmitii nke ha Karneval. O yiri ike gwụrụ ha nke na-eme na-asa ákwà mgbe onye ọ bụla ọzọ na-eme ememe Karneval. Ha stormed Town Hall na ada n'elu obodo ọchịchị. (Ugbu a na-echeta ... Karneval bụ oge mgbe ndị ọchịchị na-n'ihu ọha caricatured, na a mock ọchịchị na-hoputara. taa, a "mgbe a batara nke Beuel Town Hall" ndị inyom na-egosi ndụ na Television. girl Power!
Cologne ejị Ịtọ oge:
March 1: ejị Friday
Nke a ụbọchị bụ n'ezie a ụbọchị ike. Ma, anyị agaghị a gabiga ókè. Ọtụtụ sessions na bọọlụ-ebe na mgbede a na ụbọchị. Ya mere ọ bụrụ na ị na-na-achọ a party, ị ga-n'aka-ahụ otu.
March 2: ejị Saturday
Mgbe a ejị brunch na Kölsch biya, e nwere a arụmọrụ na bivouac nke ejị ọha mmadụ na a agha omenala na Neumarkt. Na mgbede ị nwere ike ịga na Ghost Parade.
March 3: ejị Sunday
malite na 11:11 ụtụtụ, ụlọ akwụkwọ na obi parades njem site na obodo center, featuring costumed akwụkwọ dị iche iche na mbụ ỤFỌDỤ haziri site obi klọb.
The akwa mgbe nke oge bụ nnukwu Nme na Rose Monday. The floats amalite Nme site na obodo na 10 a.m. Sonyere na ịfụ nsutu na costumed ìgwè mmadụ lining Nme ụzọ.
March 5: ejị Tuesday
Mgbe ehihie e nwere parades na iche iche nke costumed oriri oké mkpọtụ na ala ịta ahịhịa. Mgbe nke ahụ mechara, na ememe aga ruo etiti abalị, mgbe ahịhịa ọgụgụ a na-akpọ "Nubbel" ẹbụk ma ọ bụ ọkụ.
N'ụtụtụ, Katọlik na-aga chọọchị na-enweta a cross ntụ n'egedege ihu ha dị ka ihe ịrịba ama nke nchegharị. na mgbede, afọ-ejị oge na omenala kwubiri na a azụ nri abalị.
Anyị emeela ka anyị kwenye na ị ga-aga Ememme Cologne 2019, ma? Jidere gị gbaa ụgbọ okporo ígwè si Sava A Train na nkeji na-enweghị mmezi, pesky ụgwọ! Nke a pụtara ego karịa maka Weetschaff 🍻
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na nnọọ inye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcologne-festival%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / ja ma ọ bụ / na na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#Okpoko #koln europetravel ememme longtrainjourneys trainjourney Travelcologne traveltips